October 14, 2020 October 14, 2020 adminLeaveaComment on लोकसेवाका अध्यक्ष भन्छन्– संक्रमितलाई परीक्षामा राख्न सक्दैनौं, तर उपाय छ !
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितहरू सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । आयोगले संक्रमितहरू परीक्षामा बस्न नपाउने मापद,ण्ड तयार पारेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।
आयोगको यो मापदण्डले संक्रमितमाथि अन्याय भएको कतिपयको टिप्पणी छ । संक्रमितहरूको मानवअधिकारप्रति संवे,दनशील नभएको आ,रोप पनि आयोगमाथि लागेको छ ।
संक्रमितले परीक्षा दिन नपाउने मापद,ण्डले उनीहरुको मानव अधिकार हनन भएन र ? यस्तो प्रश्न राख्दा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले रोचक जवाफ दिए । कात्तिक १८ देखि लोकसेवाको परीक्षा हुने भएकाले अहिले नै संक्रमित भएकाहरुलाई आत्मबल दह्रो बनाएर चाँडो निको हुन मैनालीले सुझाए ।
उत्तरपुस्तिकाबाट पनि कोरोना सर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई निश्चित समयसम्म आइसोलेट गरेर राख्दा फेरि गोप्यताको प्रश्न आउन सक्छ । त्यसकारण, यो आयोगको रहर नभई बा,ध्यता हो भनेर बुझिदिनुपर्‍यो ।
कारण जे भए पनि लोकसेवा आयोग क,ठोर बनेको त हो नि ?
प्रहरी निरीक्षकको परीक्षा सञ्चालन गर्दा पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको थियो । अन्य परीक्षाहरूमा पनि कोभिड–१९ संक्रमित नभएको रिर्पोट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । त्यतिबेला मिडियाले वि,रोध गरेको सुनिएन । तर, लोकसेवाकै परीक्षाको मात्रै चर्चा भइरहेको छ । हामीले पीसीआर परीक्षण अनिवार्य पनि भनेका छैनौं ।
फेरि, केही परीक्षार्थीलाई हेरेर स्थगन गर्दा त्योभन्दा ठूलो संख्या परीक्षा दिने अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् । यो वर्ष अन्तिमपटक परीक्षा दिँदै रहेछन् भने त उनीहरूको उमेर जान्छ । त्यसकारण, यसलाई एउटै कोणबाट मात्रै हेर्दा अपू,रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
मानौं, हामीले कोरोना संक्रuमितलाई पुनः परीक्षाको व्यवस्था गर्‍यौं रे । आवे,दन दिने १०० प्रतिशतले परीक्षा दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छ ? छैन । किनभने, परीक्षा छुट्ने कारण कोरोना मात्रै छैन । अरु रोग, दुर्घ,टना आदिका कारण पनि परीक्षा छुट्न सक्छ । उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने ?
त्यसकारण, कोरोना लाग्नेको मात्रै मानवअधिकार हुन्छ भन्ने हिसाबले लिइदिनुभएन । दोहोर्‍याएर भन्छु– विकल्प नभएपछि हामी यो मापदण्डमा जान बा,ध्य भएका हौं ।आयोगको बाध्यता आफ्नो ठाउँमा होला, संक्रमितहरू परीक्षा दिने अधिकारबाट बञ्चित हुनु सही त होइन नि ?
पहिलो कुरा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको प्रोटोकलअनुसार संक्रमित व्यक्ति सार्वजनिक स्थानमा जानै पाउँदैन । मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि कडा कानूनी कारवाही हुन्छ भनिसक्नुभएको छ । संक्रामक रो,गसम्बन्धी ऐनअनुसार पनि अरुलाई सर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बाहिर निस्कनु भन्न मिल्दैन ।
जसलाई संक्रमणै भएको छैन, तपाईंहरू कमसेकम हाम्रै लागि भए पनि कोरोनाबाट जोगिनुस् । कोरोनाको कारणले तपाईंको परीक्षा छुट्दा उमेश मैनाली खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अन्लाईन खबर बाट